Ukuphupha iiPerms Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umtshangatshangiso osisigxina usebenzisa inkqubo yokwakha imichiza ukutshintsha okanye ukugoba iinwele ezithe nkqo. Uninzi lwexesha le nkqubo yenziwa ngobuchwephesha kwindawo yokucheba iinwele, kodwa kukwakhona iimveliso zekhaya.
Isigxina sinokuvela "ngeendlela" ezahlukeneyo. Amaza amakhulu "aseHollywood" aneenwele ezinde, ii-curls ezincinane ezisongiweyo okanye ii-curls zekhokho - phantse yonke into inokwenzeka okanye yenziwe. Nangona kunjalo, imeko yeenwele kunye nobude beenwele kufuneka zihlale zithathelwa ingqalelo ukufumana isiphumo esifunekayo.
1 Uphawu lwephupha «esisigxina» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «esisigxina» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isigxina» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «esisigxina» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha "elisisigxina" unakho ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha. nomona Iingoma. Injongo kukubonisa umntu ophuphayo ukuba yena unomona okanye ubangela umona kwabanye abantu.
Nabani na ofumana imvume kwi-salon yeenwele ephupheni lakhe kungekudala uza kuba ngumthandi rhoqo okanye omnye. umhlobo othembekileyo Dibana. Ukuba, kwelinye icala, wenza omnye umntu abe sisigxina ephupheni lakho, kungekudala uza kuba nomona ngawe.
Ukuba umphuphi ufuna amaza asisigxina njengenwele entsha ngelixa elele, ngokuthetha ngokubanzi, ukulangazelela kwakhe el mundo ukuvuka kufanele ukuba isigaba esitsha okanye ukwazi iingcinga ezingalindelekanga. Ungathanda ukucinga ngokwahlukileyo kubantu abakungqongileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ucinge nzulu ngale ndlela yokuziphatha, kuba inokukufaka engxakini.
Ukuba ephupheni iinwele zomntu oleleyo zijijekile zaba ziinwele zentsimbi ezisisigxina, kuya kufuneka ke uqonde ukuba ijikeleza kwisangqa kunye nokuqwalaselwa okuthile kubomi bokuvuka. Ucinga kakhulu okanye ngokufuthi malunga nento kuba awusifumani isisombululo esifanelekileyo. Kule meko yamaphupha, nangona kunjalo, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umnqweno wamaphupha Ukugqibelela bonisa ukuba, ngokoluvo lwakho, uya kuphumelela kuphela ngokucinga okuphindiweyo.
Uphawu lwephupha «esisigxina» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, iimvume zinokubonakala njengomfanekiso wephupha. Lindele kwaye ubonise ithemba kwindawo yokunxibelelana. Umphuphi kufuneka ajongane nehlabathi lakhe leemvakalelo kwihlabathi elivukayo ukuze aqonde ngcono iminqweno yakhe kule ndawo.
Ukuba umphuphi uzivumela ukuba avunyelwe xa elele, oku kungabonisa ukuqala kophuhliso kwi Indawo yoBuntu bhekisa. Iimeko zokuphila zalo mntu kuthethwa ngaye zinokutshintsha, ezinokuthi zichaphazele ubuntu babo. Ukuba ubona iinwele zisenza imvume ngelixa ulele, uya kuhlala ufuna ukutshintsha umfanekiso wakho ngelixa uvukile.
Ukuba umntu oleleyo wonwabile okanye uyaziqhenya ngamaza akhe amileyo ephupheni lakhe, emva koko, ngokwenkcazo yeli phupha, ukubhengezwa kwakhe ubukhulu ukuba uqaphele. Kuba ibeka ngakumbi ukugxininisa kwinkangeleko ebomini bakho. Ukudibanisa iipemethe ephupheni kunokubonisa ukungamampunge kwephupha.
Uphawu lwephupha «isigxina» - ukutolika kokomoya
Uhlalutyo olugqithisileyo lwephupha libona kwisimboli yephupha "elisisigxina" uphawu lwe ukuxelisa amandla endalo. Nangona kunjalo, umphuphi uya kukhula kakubi ngokomoya ukuba ubambelela kwizinto zomgunyathi. Kuya kufuneka ufumane eyakho indlela eya kule mikhosi.